Ugu yaraan 25 askari oo ciidamada Puntland ah oo lagu dilay weerar ay Al-Shabab ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala Buuraha Galgala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan 25 askari oo ciidamada Puntland ah oo lagu dilay weerar ay Al-Shabab ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala Buuraha Galgala
Ugu yaraan 25 askari oo ciidamada Puntland ah oo lagu dilay weerar ay Al-Shabab ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala Buuraha Galgala
June 8, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ciidamada Puntland oo ku sugan Buuraha Galgala. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 25 askari oo katirsan ciidamada Puntland ayaa la dilay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala buuraha Galgala subaxnimadii hore maanta oo Khamiis ah, sida uu sheegay sargaal.
Sargaal katirsan laamaha amniga Puntland oo magaciisa qariyay ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in ugu yaraan 25 askari oo katirsan ciidamada Daraawiishta Puntland lagu dilay weerarka.
Weerarka subaxnimo ayaa lagu bartilmaameedsaday saldhig ciidan oo la dhaho Af-urur oo qiyaastii 70 km dhanka galbeedka uga beegan magaalo xeebeedka Boosaaso, sida uu sheegay sargaalku.
Puntland ayaa ciidamo aad u hubaysan u dirtay saldhiga weerarka kadib, sida uu Puntland Mirror u sheegay sargaalku.
Kani waxa uu ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa oo hal maalin soo gaara ciidamada Puntland tan iyo sanadkii 2010-ka, markaas oo uu bilaabmay dagaalka u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Madaxweynaha Puntland oo qabtay kulan deg deg ah kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala gudaha Buuraha Galgala
Dimishiq-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 25 qof ayaa lagu dilay qarax is-miidaamin ah kaasoo maanta oo Arbaco lala eegtay dhisme weyn oo maxkamadeed oo kuyaala gudaha caasimada dalka Suuriya ee Dimishiq, sida ay ku warantay wakaalada [...]